आकाशवाणी (Aakashwani): May 2013
टाँए-टाँए, फिस्स्स !
रजनीशले 'भिंडको बुद्धी हुँदैन' भन्थे । हिटलरले पनि यो कुरा राम्रोसँग बुझेका थिए । हिटलरले भिँडको राजनीति गर्न महारथ हासिल गरेका थिए । उन्ले प्रोपोगान्डा क्रिएट गर्न पाउल जोसेफ गोयबल्सलाई मन्त्री राखेका थिए । जब हिटलर डरलाग्दो र भयानक शैलीमा भाषण गर्थे; गोयबल्सले भाडामा राखेका मान्छेले भिंडको चारै तिरबाट ताली बजाउँथे । एउटाले ताली बजाए पछी अरुले पनि बजाउने भिंडको चलन नै हो । अनी भिंडले हिटलरको शब्द-शब्दमा ठुलो गड्गडाहटकासाथ ताली बजाउँथ्यो । हिटलरले 'मर्न जाऊ' भनेर आदेश दिए पनि भिंड तयार हुन्थ्यो ।
तपाईंले पनि बिचार गर्नु भएको होला, भिँडको पछी लागियो भने आफु कहाँ पुगियो, कती हिंडियो, के-के गरियो; केही थाहा हुँदैन अनी खाना-पिना, भोक-प्यास- सुद्धी-बुद्धी सब हराउँछ । एउटाले 'ठोक-ठोक' भन्यो भने भिंडले ठोक्छ । अनी अर्कोले 'ढुङ्गा हानौं' भन्यो भने भिंडले 'किन हान्ने ?' भनेर प्रश्न गर्दैन । बरु जतापायो त्यतै ढुङ्गा हान्न थाल्छ ।
त्यसैले भिंडले के भन्दैछ ? त्यो नसुन्नुहोस् अनी तुरुन्तै नपत्याउनुहोस् । भनिन्छ सबको आत्मामा भगवान छ । तपाईंको आत्माले के सही र सत्य हो भन्छ; त्यही मात्र सुन्नुहोस् । बहुसंख्यकले भनेको भन्दैमा त्यो नै ठीक र सत्य हो भन्ने छैन । 'अरुले के भन्लान् !' भन्ने रोगबाट मुक्त हुन जरुरी छ । भरसक आफुलाई भिंडबाट अलग राख्नुहोस् ।
Labels: Note, Osho, philosophy
साप्ताहिक (कान्तिपुर पब्लिकेशन,काठमान्डु,नेपाल)मा प्रकाशित